आयल निगमलाई १५ दिनमा करीब एक अर्ब नोक्सान | Artha News Nepal
Home	ऊर्जा	आयल निगमलाई १५ दिनमा करीब एक अर्ब नोक्सान
काठमाडौं – विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको मूल्यवृद्धिसँगै नियमित मूल्य समायोजन हुन नसक्दा नेपाल आयल निगमले चर्को नोक्सानी व्यहोर्न थालेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रचलित बजारमूल्य लागत मूल्यभन्दा कम भएपछि निगम नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
निगमको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार फेब्रुअरीको शुरुदेखि मध्यसम्मको १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीबाट झण्डै रू. ९७ करोड ७५ लाख बराबरको नोक्सान हुने सम्भावना छ ।
निगमले हाल दैनिक रू. साढे छ करोड नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । पेट्रोल, डिजेल/ मट्टितेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको घाटाका कारण चर्को नोक्सानी हुने अवस्था देखिएको हो ।
इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) ले सोमवार पठाएको मूल्यसूचीअनुसार फेब्रुअरीको पहिलो पाक्षिकका लागि निगमले पेट्रोलको प्रतिलिटर ५१ रुपैयाँ ६९ पैसा, डिजेलको ५२ रुपैयाँ ३९ पैसा, मट्टितेलको ४८ रुपैयाँ ७६ पैसा र हवाई इन्धनको ४८ रुपैयाँ पाँच पैसा तिर्नुपर्छ । त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु एक हजार १२९ रुपैयाँ ८१ पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
आईओसीले पठाएको मूल्यमा विभिन्न शीर्षकमा कर लाग्दै आएको छ । ती सबै कर जोडेर निगमलाई पेट्रोलमा ११६ रुपैयाँ ८० पैसा पर्न आउँछ । त्यस्तै, डिजेलमा प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ ६७ पैसा, मट्टितेल प्रतिलिटर ७४ रुपैयाँ ९० पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धन प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु एक हजार ६७५ रुपैयाँ ११ पैसा लागत पर्ने देखिन्छ ।
निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रू. ११०, डिजेल र मट्टितेल रू. ९३, आन्तरिक हवाई इन्धन रू. ६५ र अन्तरराष्ट्रिय हवाई इन्धनको प्रतिलिटर शून्य दशमलव ८७ अमेरिकी डलर तोकेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको विक्री मूल्य प्रतिसिलिण्डर रू. एक हजार ३७५ तोकिएको छ ।
निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा छ रुपैयाँ ८० पैसा, डिजेलमा चार रुपैयाँ ६७ पैसा नोक्सान हुँदै आएको छ । मट्टितेलमा निगमलाई प्रतिलिटर १८ रुपैयाँ १० पैसा र आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रू. २ र अन्तरराष्ट्रिय हवाई इन्धनमा ३५ रुपैयाँ ८७ पैसा नाफा हुँदै आएको छ । खाना पकाउने ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर ३१७ रुपैयाँ ११ पैसा नोक्सान हुने निगमले जानकारी दिएको छ ।
चालू १५ दिनमा निगमले कुल ३० हजार किलोलिटर पेट्रोल खपत हुने अनुमान गरेको छ । यस आधारमा पेट्रोलको विक्रीबाट मात्रै कुल रू. २० करोड ३९ लाख, ९५ हजार किलोलिटर डिजेल विक्री हुँदा रू. ४४ करोड ३५ लाख तथा १४ लाख ३६ हजार एलपी ग्यास सिलिण्डर विक्री हुँदा कुल नोक्सान ४५ करोड ५६ लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।
एक हजार ३५० किलोलिटर मट्टिलेल विक्रीबाट यसबाट सो अवधिमा रू. दुई करोड ४४ लाख नाफा हुने अनुमान गरको छ । त्यस्तै, एक हजार ३५० किलोलिटर आन्तरिक हवाई इन्धनको विक्रीबाट रू. ३२ लाख तथा एक हजार ६०४ किलोलिटर अन्तर्राष्टिय हवाई इन्धन विक्री गर्दा रू. नौ करोड ८० लाख नाफा हुने निगमले जानकारी दिएको छ ।
आयल निगमनेपाल आयल निगमनोक्सान